10 Ọtụtụ nkuzi golf dị egwu na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Ọtụtụ nkuzi golf dị egwu na Europe
Ndagwurugwu na -acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ugwu nta, nnukwu ala ahịhịa juru, na ebe ndị mara mma na Europe, ndị a 10 klaasị golf kacha mma na Europe, bụ ụfọdụ klọb golf kacha elu n'ụwa. Emebere egwuregwu golf ọ bụla ka ọ zuo oke, ngwakọta dị ebube nke akụrụngwa na ịma mma eke.
1. Golf Blue Green Pleneuf-Val-Andre Na Brittany
Na echiche ndị mara mma nke English Channel, nkuzi golf Bluegreen Pleneuf Val Andre dị ịtụnanya. Ogige golf Bluegreen na Brittany bụ otu n'ime egwuregwu golf kacha mara mma na Europe.
Ahịhịa akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na -ahụ anya n'akụkụ mmiri Breton, na njikọta nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na oke osimiri na -acha anụnụ anụnụ dị ịtụnanya. Na mgbakwunye, ị ga -ere n'otu n'ime egwuregwu 500 egwuregwu golf kacha mma n'ụwa.
2. Ọzụzụ Scandinavia ọhụrụ: Copenhagen
25 kilomita site na Copenhagen, Usoro nkuzi golf ọhụrụ a nọ na 50 egwuregwu golf kacha elu na Europe kwa afọ. Oghere Ọhụrụ 36 nwere oghere bụ otu n'ime ebe egwuregwu golf kacha mara mma na Europe 25 hectare nke oke ọhịa gbara ya gburugburu.
Iyi na -eduga na ọdọ mmiri eke, ọnọdụ dị jụụ, na klọb golf osisi na-emeri, ga -eju gị anya site n'ọnụ ụzọ oghere mbụ. Ọdịdị ala ahụ mara mma n'ezie ma dọta ọtụtụ ndị gọọmenti si gburugburu ụwa.
3. Njikọ Castletown Golf: Isle of Man
Ikuku ikuku, okooko osisi ọhịa, na ọmarịcha echiche nke Isle nke Mmadụ, igwu golf na Castletown golf njikọ nkuzi bụ ahụmịhe agaghị echefu echefu. Isle nke mmadụ bụ otu n'ime ebe ndị mara mma na Europe, na klọb gọọlfụ bụ otu n'ime ebe egwuregwu golf kacha mara mma na Europe.
Oké osimiri gbara gị niile gburugburu 3 akụkụ, ka ị na -egwu egwuregwu ahụ na ọmarịcha agwaetiti Langness. Oké osimiri dị n'akụkụ oke osimiri, ọdịda anyanwụ dị ebube, ọkwa Castletown Golf Links 8th na klọb golf kacha dị egwu na UK na Ireland. Oghere nke 17 na -eleghara oghere ahụ anya Oké Osimiri Irish, na echiche si na oghere 18, akụkọ ihe mere eme St.. Michaels Isle, 12ụlọ ụka narị afọ, echiche nke nwere ike ịdọpụ uche golfer ọ bụla.
Nịm na mbara ala, na -eleghara Oke Osimiri Atlantic na osimiri anya, Ogige golf Tralee na Ireland bụ otu n'ime ihe egwuregwu golf pụrụ iche na nke mara mma na Europe. Ị ga na -achụsasị oghere gafee ugwu nta akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na -ele anya nke ọma na -acha anụnụ anụnụ n'ihu gị.
Ebe egwuregwu golf a nwere oghere nwere oghere 18 dị na County Kerry, ụlọ na Dingle Peninsula, na Killarney mara mma National park. A na -akụ ebe egwuregwu gọọlfụ n'akụkụ ọnụ ya oke osimiri di egwu, ya na moorland green na akara ngosi Southwest Ireland.
Otu n'ime ndị kacha ochie, ma ọgbara ọhụrụ na ngwa, klọb golf na Europe, Ebe egwuregwu golf Crans-sur-Sierre dị na Switzerland bụ otu n'ime klọb golf kacha mara mma na Europe. Ọdọ mmiri eke, ugwu, na ndagwurugwu Switzerland na -acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ bụ ihe nlegharị anya dị egwu.
Ọmarịcha golf a bụ na Switzerland Alps, ya mere, ihe nkiri ahụ na -adọrọ adọrọ. Na nlele nke Mont Blanc na Matterhorn, ugwu kachasị elu na nke kacha mara mma na Europe, ọ ga -eju gị anya na golf a. Ogige golf Crans-sur-Sierre bụ njem ụgbọ oloko mara mma n'ebe Geneva, na Bern.
6. Klaasị Golf kacha mma na Ireland: Njikọ Njikọ Isi Ochie
Nọdụ ala n'elu Old Isi Kinsale, oké osimiri gbara ya gburugburu, ebe egwuregwu golf Kinsale na -enye ndise amam-ihe, echiche kachasị ọmarịcha na Ireland na UK niile.
Na ahịhịa ndụ ndụ ndụ, ala mkpọmkpọ ebe, na echiche osimiri, odida ala Irish ahụ akwụsịghị ịtụ n'anya. Ya mere, yaadi ga -eju gị anya na klọb golf Old Head Kinsale. Ị ga -egwu golf na a 350 nde ochie aja okwute, na -atụgharị n'ebe ugwu n'oge oge. Ọmarịcha golf a dị na mpaghara Cork, na ịkwọ ụgbọ mmiri, azu, ndakpu ala mmiri, na ọtụtụ ndị ọzọ ihe omume mpụga maka ndị na -anụ mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri a dị nchebe.
7. Kachasị Golf Golf: Passier Golf Club Meran South Tyrol
Panoramic echiche nke kacha mma sinik ugwu na Europe, Klọb gọọlfụ Passier dị na Meran na -enye ndị gọlfụ ha ahụmịhe agaghị echefu echefu. Ọzọkwa, na mpaghara South Tyrol, ponds, bonka, na ugwu nta ndụ ndụ, klọb golf Passier nwere ọnọdụ na atụmatụ dị ịtụnanya.
Ọzọkwa, klọb golf 18 oghere na -agbasa na mbara ala, na ahịhịa ịta ahịhịa, na -adọta ndị golf si n'akụkụ ụwa niile maka ngwụcha ngwụcha golf, ma ọ bụ ogologo oge ịpụ na ọdịdị Tyrolian.
Jiri ụgbọ oloko na -aga Trento ka Bolzano
Site na ụgbọ oloko gaa Milan na Bolzano
Site na ụgbọ oloko si Bologna gaa Bolzano
Venice jiri ụgbọ oloko gaa Bolzano
N'etiti oke ọhịa Alpine, ụlọ osisi gburugburu, na ala ahịhịa juru, nkuzi gọọlfụ Eichenheim bụ otu n'ime klọb golf mara mma na Europe. Ikuku alpine ọhụrụ, isi ísì nke okike, na ịma mma eke sitere n'ike mmụọ nsọ ndị egwuregwu golf kacha mma n'ụwa. Eichenheim golf nwere 18 oghere, gbasara ihe karịrị 6000 mita.
Ebe egwuregwu golf a mara mma bụ otu n'ime klọb golf kacha mma na Austria, na ihe eji enyere ndụ aka: sawụna, Ọdọ mmiri ime ụlọ na n'èzí iji zuru ike mgbe emechara asọmpi golf. Ọ nweghị ihe dị ka ala ugwu ugwu yana ọnọdụ dị oke mma iji mee agụụ gị.
9. Ogige Country Gardagolf: Italy
From Manerba-Fort of the palace of Soianoto the hills of Polpenazze and castle, the Gardagolf Club offers scenic views of olive trees and Lake Garda. Usoro nkuzi nke Gardagolf nwere 27 oghere, gbasara 110 hectare, na mpaghara Lombardy dị egwu.
Ugwu Valtenesi gbara okirikiri golf a mara mma, na -enye ndị egwuregwu bọọlụ gọọlfụ kacha dị oke egwu na echiche na -akpali akpali. Usoro uhie bụ ihe kachasị mma na Gardagolf, nke nwere okooko osisi na osisi toro ogologo gburugburu.
Jiri ụgbọ oloko na -aga Trento ruo Ọdọ Garda Peschiera
Bolzano Bozen jiri ụgbọ oloko gaa Ọdọ Mmiri Garda Peschiera
Bologna jiri ụgbọ oloko gaa Ọdọ Mmiri Garda Peschiera
Venice jiri ụgbọ oloko gaa ọdọ Garda Peschiera
10. Ogige Golf Andermatt: Switzerland
Nkume Switzerland ọzọ, ogige golf Andermatt na -emechi anyị 10 ọtụtụ klaasị golf mara mma na ndepụta Europe. Ogige golf Andermatt dị na ndagwurugwu Switzerland mara mma. Ọnụ ọnụ ugwu na -esusu mbara igwe ọnụ, ugwu nta ndị na -acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, na mpempe akwụkwọ ozi dị ka odida obodo.
Ọnọdụ ahụ dị egwu, na ọbụna ndị egwuregwu kacha lekwasị anya nwere ike ịdọpụ uche na ndagwurugwu Ursern mara mma. Emebere ogige golf Andermatt mara mma ka ọ bụrụ akụkụ nke okike ma nwee omume enyi. Ị ga -ahụ iyi mmiri na ahịhịa ahịhịa nke etinyere n'ụzọ dị ịtụnanya na klọb golf. Enwere 18 oghere ịhọrọ site na. Na mgbakwunye, ifufe ugwu siri ike na -enye onye na -anụ golfer na -anụ ọkụ n'obi aka, iji kwalite egwuregwu ha.
Bern ga -ejikọ na ụgbọ oloko
Anyị na Save A Train ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka ịhazi njem otu oge na ndụ ndị a 10 ọtụtụ sinik golf na Europe ụgbọ oloko.
Ịchọrọ itinye akwụkwọ akụkọ blọọgụ anyị "1o Ọtụtụ nkuzi golf na Europe" na saịtị gị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-scenic-golf-courses-europe%2F%3Flang%3Dig< - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)